छोरी पराईको नासो की संवृद्धिको साँचो ?
करिब करिब २०० जना मानिसको भिडमा माईक्रोफोन समातेर एक महिला नेतृले महिला स-शक्तिकरणको बारेमा आफ्ना धारणा राखिरहँदा मनमा एक किसिमको साहस पलाएको थियो। उनको भनाइमा बिचबिचमा सहभागीहरुको तालीले उर्जा थपिए झै महशुस भईरहेको थियो। एक्कासी सहभागी बहिनी जुरुक्क उठेर रुदै आफ्नो प्रश्न राखिन्। उनको प्रश्न यस्तो थियो l
म अहिले १६ बर्षकी भए ४ बर्षकी हुदा मेरी आमा बित्नुभयो, आमा बितेको एक बर्ष नहुदै बाबाले सानिमा ल्याउनु भयो। सानीआमाको व्यबहार म प्रति कहिल्यै पनि राम्रो भएन। उहाँले मलाई दिनुसम्म यातना दिनुभयो। मैले नसक्दा नसक्दै पनि घरको काममा जबर्जस्ती लगाउनुहुन्थ्यो। कहिल्यै पेटभरि खाना पनि पाईन। कहिलेकाही मात्र विद्यालय जान्थे । पढाइमा ध्यान दिन नसकेकाले पढाइ त्यति राम्रो पनि थिएन १५ बर्षको हुदा कक्षा आठमा पढ्दै थिए त्यत्तिकैमा म भन्दा १७ बर्ष जेठो दुई सन्तानको बाउसँग बाबाआमाले श्रीमती मरेको पाको मान्छेले राम्ररी पाल्छ भनेर मेरो चाहना विपरीत बिहे गरिदिए। पराइघरको क्रुर ब्यबहार र जिम्मेवारी सहन नसकेर अहिले म माईतमा छु। माईतमा पनि बिहे गरेर फर्केर आएकी छोरी हाम्रो ईज्जत् गयो भनेर राम्रो व्यबहार गर्नुहुन्न। हुन त म जन्मेको घरमा नै मलाई राम्रो व्यबहार गरिदैन भने अर्काको घरको के कुरा गर्नु त्यहिपनि बिहे हुनुभन्दा पहिले त के राम्रो थियो र अहिले राम्रो हुन्छ त? मैले हजुरलाई के कुरा सोध्न खोजेकी हुँ भने के महिला पनि फरक- फरक हुन्छन् र? महिलाले पाउने अधिकार र न्याय पनि फरक-फरक हुन्छ र?“
यो बहिनीको प्रश्नले र उनको प्रस्तुतीले वातावरण नै खल्बलायोे । सबैलाई गम्भीर बनायो। यस्ता घटना त हाम्रो समाजमा छ्यापछ्याप्ती छन्। नारीलाई कुनैपनि ठाउँमा सन्तोष छैन। शान्ति छैन। उसले मेरो भनेर चित्त बुझाउने कहि केही छैन उ अरुको चाहनाको बस्तु मात्रै हो भन्ने मान्यता हाम्रो सामाजिक संरचनाले जवरजस्त स्थापित गरेको छ। यसको कारण एक नारीले अर्को नारीलाई गर्ने व्यबहार पनि विभेदपूर्ण छ। धार्मिक तथा सामाजिक संरचनाको कारणलेनै महिला हिंसाको स्वरुपमा वृद्धि भएको हो । पहिलो कुरा गर्भमानै लिङ्ग पहिचान गरेर छोरीलाई यस धर्तीमा पाईला टेक्न दिईदैन अपबाद बाहेक ।
जब छोरीले यस धर्तीमा पाईला टेक्छिन् अनि भन्ने गरिन्छ मेरो घरमा लक्ष्मीको जन्म भयो। यति मीठो नाम पाउने लक्ष्मी नाममात्रको लक्ष्मी हुन पुग्छिन्। आफु जन्मेको घरलाई उनी सबैथोक ठानेर सानैदेखि सजाउन थाल्छिन्। परिवार , नातागोता र समाजलाई उनीहरूले चाहेको छोरीको परिचय पनि दिन्छिन्। हरेक प्रकारले जन्मघरलाई सजाउने उनलाई उनको चाहना विपरीत पराइको हातमा सुम्पिईन्छ। कस्तो विडम्बना यो एउटा नारीका लागि केही समयमै जन्मघर माईती घरमा परिणत हुन्छ । छोरीलाई घरको काममा मात्रै तल्लीन बनाउने परम्पराले अहिले पनि प्रश्रय पाइरहेको छ किनकि छोरी पराईको नासो हो । पराईको घर सजाउने बस्तु हो भन्ने मानसिकताको कारण छोरीहरु यसको शिकार हुनुपरेको अबस्था छ। शहर देखि गाउँसम्म निशल्क शिक्षाको लहर फैलिएको भएतापनि घरहोस् वा विद्यालयमा छोराले जस्तो शैक्षिक वातावरण छोरीले पाउन सकेका छैनन् ।
सरु गैरे, अधिकारकर्मी
छोरीहरु घरायसी काममा सरिक भएर र कामकै कारण विद्यालय उपस्थित हुदैनन् । आर्थिक रुपमा सम्पन्न परिवारमा मात्र होइन सम्पन्न परिवारमा पनि यो अवस्था छ नै। छोरा धन कमाउने र छोरी घरको काम गर्ने हो भन्ने धारणाले गर्दा पनि यस्तो भएको हो। आफ्नो बाबाआमाको घरमा हुदा मात्रै होइन बिहे गरेर कर्म घर गए पछाडि पनि नारी पराईघरका मान्छेलाई सन्तुष्ट बनाउनको लागि आफुलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि उभ्याउन तयार हुन्छिन् । तर उनको त्याग र तपस्याको ख्याल गरिदैन। सर्वसाधारण महिलाले मात्रै भोग्नुपरेको कुरा होइन यो शिक्षित र नेतृत्व लिने महिलाहरु पनि यो परिस्थितिबाट उम्कन सकेका छैनन् । उनीहरुले दोहोरो - तेहोरो जिम्मेवारी बहन गरेर आफुलाई चलायमान बनाएका छन्। घरपरिवारको चित्त बुझाउने, पारिवारिक व्यबस्थापनजस्तो कुरामा ध्यान दिएर मात्रै बल्ल अरु काममा लाग्न बाध्य छन्। यति हुदाहुदै पनि परिवारभित्रै महिलाले महिलाई गर्ने तुच्छ व्यवहारले अगाडि बढ्न लागेको महिलालाई असर पुर्याएको छ।
समय-समयमा हुने महिला आन्दोलनले केही परिवर्तन त भएको छ तर पनि पूर्णरूपमा परिवर्तनका लागि हाम्रो सामाजिक तथा धार्मिक संरचनामा परिवर्तन गराउनु, हामी सबै मानव हौँ भन्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु, छोराछोरीबिचको विभेदलाई अन्त्य गर्नु आदि कार्य गरेमा र सबै नारी आत्मनिर्भर भएमा यो सम्भव छ। सबै अभिभावकले छोरीलाई आत्मनिर्भर बन्न सिकाउनुपर्छ। जन्मघर तिम्रो पनि हो, दाजुभाइ सरह अधिकार तिम्रो पनि छ भनेर सिकाउनुपर्छ। छोरीलाई निर्जीव र पराईको घरको दास बन्नको लागि हौसला दिनुहुँदैन । बरु मेहनति, परिश्रमी , शिक्षित र लगनशील बनेर आफ्नो पहिचान आफै बनाउनको लागि सहयोग गर्नुपर्छ। फलानाकी छोरी, फलानाकी बुहारी , फलानाकी श्रीमती भनेर अरुको नामबाट होइन उनलाई आफ्नै नामले पुकार गरिने वातावरणको सिर्जना गर्नमा जोड दिनुपर्छ। नारीलाई सकेसम्म आफ्नो रक्षा आफै गर्न सक्ने बनाउन सबैको ध्यान जानुपर्छ ।
२१सौँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि अरुको भरमा बाँच्ने कुरामा केन्द्रित गरिनुहुदैन। जन्मिदै आफ्नै बाबुको घरमा आफ्नै अभिभावकसँग अधिकारविहिन हुन सिकायौ भने अरुसँग कसरी अधिकारको लडाइँ लड्न सक्छन् । नारीको बौध्दिकता कमजोर हँुदैन त्यसैले उनलाई कमजोर बनाउने कुरा गर्नु हुदैन । गलत शिक्षाका कारण सधैं नारी कमजोर भईरहने हाम्रो समाजको यथार्थलाई चिर्न हाम्रो चिन्तनलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। नारीहरु विद्रोह गर्न सक्दैनन् किनभने समाजले नारीलाई अधिकार होइन कर्तव्यमा बाँच्न सिकाएको छ। दास बनेकी नारीले दासताको बन्धन तोड्न खोज्दा समाजविरोधिको संज्ञा पाउछिन्। यस्तो धारणालाई निमिट्यान्न पार्नको लागि महिला पुरुष बिचको समानता, एक महिलाले अर्की महिलालाई सम्मान गर्ने, छोराछोरीबिचको विभेद अन्त्य गर्ने, जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नुपरेपनि तमाम बाधा अड्चन पन्छाउदै अघि बढ्न खोज्ने नारीलाई सहयोग गर्ने र अवसर दिनुपर्छ। चाहना विपरीत एउटी नारीको भावनामा खेलवाड नगरी मानवीय व्यबहार गरेर समाजमा बाच्ने, केही गर्ने र अगाडि बढ्ने हौसला प्रदान गर्नुनै आजको एकमात्र विकल्प हो । यसको सबैले मनन गरि व्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ।
‘सति र दमिनी’ हुने महिला मुक्ति
८ मार्च सन्दर्भ : नारी अर्थात देवी जागिन् भने...
८ मार्च: नेपाली महिला आन्दोलन, योगदान र उपलब्धी
फाल्गुन २५, २०७६ सारङ्गी न्यूज
'सानोतिनो कुरा मनमा राख्नाले असल सम्बन्ध ध्वस्त बनाइदिन्छ'
फाल्गुन २३, २०७६ सारङ्गी न्यूज